Kooxaha Liverpool iyo Tottenhma oo Ka Haray Koobka Europa League-ga iyo Everton oo Soo Baxday – Radio Muqdisho
Kooxaha Liverpool iyo Tottenhma oo Ka Haray Koobka Europa League-ga iyo Everton oo Soo Baxday
Kooxda Liverpool oo ka socotay dalka ingiriiska ayaa ka hartay koobka labaad ee qaarada yurub ee Europa League-ga,ka dib markii ay kooxda Besiktas ee dalka turkiga uga badisay rigoorayaal 4-5 ah.
Kooxda Liverpool ayaa kulankii hore ee ka dhacay garoonkeeda Anfield waxa ay ku soo badisay 1-0.
Kooxda Besiktas ayaa caawo garoonkeeda Ataturk Olympic Stadium 1-0 uga badisay kooxda Liverpool,waxaana ciyaarta lagu daray 30-daqiiqo oo dheeraad ah labada kooxoodna wax gool ah iska dhalin sodonkii daqiiqo oo lagu daray ciyaarta,waxana ay ku kala baxeen gool ku laad ama rigoorayaal.
Kooxda Besiktas ayaa wareega 16-ka ugu soo gudubtay rigoorayaal 5-4 ah.
Ciyaaryahan Dejan Lovren ayaa rigooradii ugu dambeysay ka qasaariyay kooxdiisa Liverpool.
Kooxda Tottenham ayaa sidoo kale ka hartay koobka labaad ee qaaraada yurub ee Europa League-ga,ka dib markii ay kooxda Fiorentina ee dalka talyaaniga ay 2-0 uga badisay.
Kooxda Fiorentina ayaa waxaa labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Mario Gomez iyo Mohamed Salah.
Kooxda Fiorentina ayaa isku celcelis ahaan wareega 16-ka ugu soo baxday 3-1.
Kooxda Everton ayaa soo baxday wareega labaad ee koobka Europa League-ga,ka dib markii ay caawo garoonkeeda goodison Park 3-1 uga badisay kooxda Young Boys Bern oo ka socotay dalka Swisserland.
Ciyaaryahan Romelu Lukaku ayaa labo ka mid ah goolasha u dhaliyay kooxda Everton,halka goolka kale uu u dhaliyay ciyaaryahan Kevin Mirallas.
Kooxda Everton ayaa isku cel celis ahaan 7-2 ugu gudubtay wareega 16-ka ee koobka Europa League-ga.
Hadaba Hoos ka Akhriso kooxaha kale ee u soo baxay wareega 16-ka ee koobka Europa League-ga.
Zenit St. Petersburg-Russia
Gudoomiyaha Iyo Gudoomiye Ku Xigeenka 2aad Ee Baarlamaanka Oo Booqasho Ku Jooga Dalka Jarmalka “SAWIRRO”
Chelsea oo Heshiis Shan Sano ah La Saxiixatay shirkada Yokohama Rubber Company Ltd “Sawirro”